कस्ता व्यक्तिका हातमा फिटिक्कै पैसा टिक्दैन तपाईलाई पत्यार लाग्छ ? मानिसको हातमा भएको कोठीका कारण उसको हातमा कति पैसा रहन्छ र टिक्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । शरीरमा कोठीको निकै महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ । तपाइँले जति पैसा कमाएपनि तपाइँका यी अंगमा कोठी छ भने हातमा पैसा टिक्दैन ।
Tags: तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? अपनाउनुश ई ४ उपाय
Previous तपाईको भाग्य चमकाउन शुक्रबारका दिन यि काम गर्नुहोस्
Next शनिबार दिउँसोदेखि सूर्यले घर परिवर्तन गर्ने, सबै राशिमा यस्तो प्रभाव